ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ဒီမိုကရေစီ အသွင်သို့ပြောင်းလဲနေပြီ…. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ဒီမိုကရေစီ အသွင်သို့ပြောင်းလဲနေပြီ….
ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ဒီမိုကရေစီ အသွင်သို့ပြောင်းလဲနေပြီ….
Posted by anybody on Jun 8, 2012 in Copy/Paste |4comments
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဝင်များအား အရည်အချင်းပြည့်ဝပြီး ပြည်သူများကို ဦးဆောင်နိုင်သော၊ ပြည်သူ့ကိုယ်စားပြု အမာခံများဖြစ်စေရေး၊ ပြည်သူက ယုံကြည်အားကိုးသော ပြည်သူ့ပါတီကြီးဖြစ်စေရေး၊ ပါတီအဓွန့်ရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲစေရေးအတွက် ဒီမိုကရေစီ နည်းစနစ်အရ ပြည်သူက ရွေးချယ်တင်မြှောက်သည့် ပါတီကော်မတီဝင်များ အဆင့်ဆင့် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်းအား တစ်နိုင်ငံလုံး ပျံ့နှံ့စွာ ဆောင်ရွက်နေကြောင်း၊
ယခုကဲ့သို့ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပထမအဆင့် ရပ်ကွက်/ကျေးရွာအုပ်စု များရှိ ပါတီဝင်များမှ အုပ်စုခေါင်းဆောင်၊ ဒုတိယခေါင်းဆောင်များကို မဲပေးစနစ်ဖြင့် ပဏာမရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း) တွင်လည်း အဆိုပါရွေးချယ်ပွဲကို ရွေးချယ်နိုင်ရန်အတွက် (၈-၅-၂၀၁၂)ရက်နေ့ နံနက် ၀၉း၀၀ နာရီအချိန် တောင်ကြီးမြို့ရှိ ရှမ်းပြည်နယ်ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီရုံးတွင် မြို့နယ်တစ်မြို့နယ်လျှင် ကြံ့ဖွတ်ပါတီ အတွင်းရေးမှူး (၁)ဦး၊ EC ၂ ဦး စုစုပေါင်း (၃)ဦး တက်ရောက်စေပြီး ၄င်းတို့မြို့နယ်ရှိ နယ်မြေအခြေအနေသုံးသပ်ချက်၊ အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ပါတီ၏ ဆက်ဆံရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ၏ဆက်ဆံရေး၊ ပါတီနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေး အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် ပြည်သူဆက်ဆံရေး အခြေအနေများကို အစီရင်ခံစာပြုစုလာရန် ညွှန်ကြားခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
သို့ပါ၍ မြို့နယ်တိုင်းတွင် ၁၀-၅-၂၀၁၂ ရက်နေ့မှ စတင်ကာ အောက်ခြေရပ်/ကျေးအဆင့် ကျစ်လစ်ခိုင်မာစွာ ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းအရ အခြေခံအဖွဲ့၊ အခြေခံအဖွဲ့စိတ်နှင့် အခြေခံအဖွဲ့စုများအား ပါတီဝင် အနည်းအများပေါ်မူတည်ပြီး ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းရမည်ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါ အခြေခံအဖွဲ့များထဲမှ ခေါင်းဆောင်၊ ဒုတိယခေါင်းဆောင်များကို ပါတီဝင်များမှ မဲပေးရွေးချယ်စေခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းမှု အခြေအနေအား ၂၅-၅-၂၀၁၂ ရက်နေ့တွင် ထပ်မံအစည်းအဝေးခေါ်ယူပြီး သုံးသပ်ချက်များ တင်ပြစေခဲ့သည်။
ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)တွင် ခရိုင်(၁)ခု၊ မြို့နယ်(၁၀)မြို့နယ်၊ မြို့နယ်ခွဲအဆင့် (၇)ခုရှိပြီး ရပ်ကွက် (၁၄၃ ) ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာအုပ်စု (၂၃၀)အုပ်စု၊ ရွာပေါင်း(၂၉၀၈)ရွာခန့် ရှိတဲ့အနက် အုပ်စုခေါင်းဆောင်၊ ဒုတိယခေါင်းဆောင်များကို ပထမဦးစွာ ရွေးချယ်ပြီး ၄င်းတို့ထဲမှ မြို့နယ်အဆင့်တွင် ဒီမိုကရေစီ နည်းလမ်းကျကျ ၀င်ရောက် ရွေးချယ် ခံရမှာ ဖြစ်ကြောင်း ပါတီဝင်တစ်ဦး၏ ပြောကြားချက်အရ သိရှိရပါသည်။
မြို့နယ်အဆင့်ကိုလည်း (၄-၆-၂၀၁၂)ရက်နေ့မှ (၉-၆-၂၀၁၂)အထိ ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ရာ တစ်မြို့နယ်လျှင် ပါတီကော်မတီဝင် အဟောင်း (၁၅)ဦးနှင့် အုပ်စုခေါင်းဆောင်၊ ဒုခေါင်းဆောင်များထဲမှ မဲအများဆုံးရရှိသည့် ပါတီဝင် (၁၅)ဦးနှင့် ခရိုင်/ပြည်နယ်ကော်မရှင်အဖွဲ့မှ ကြီးကြပ်ပြီး အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်လာသည့် ရွေးချယ်ခံ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ပါတီဝင်များမှ လျှို့ဝှက်ဆန္ဒမဲပေးစနစ်ဖြင့် အသီးသီး ရွေးချယ်တင်မြှောက်လျှက်ရှိပြီး မနက်ဖြန်မှာ မြို့နယ်အားလုံး အပြီးသတ် ရွေးချယ်ပြီးစီးမည်ဖြစ်ကြောင်း ပါတီဝင်တစ်ဦး၏ ပြောကြားချက်အရ သိရှိရပါသည်။ ထိုသို့ရွေးချယ်ရာတွင် ပြည်နယ်ပါတီမှ (၁)ဦး၊ ခရိုင်ပါတီမှ (၁)ဦး၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်(၃)ဦး စုစုပေါင်း (၅)ဦးဖြင့် မြို့နယ်ကော်မရှင်များဖွဲ့စည်းပြီး ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ရွေးချယ်ခံရသည့် မြို့နယ်ပါတီကော်မတီဝင် (၁၅)ဦးမှ အောက်ပါကျမ်းသစ္စာဆိုကြရကြောင်း-
ကျွန်ုပ်သည် – ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီအဆင့်ဆင့်၏ ဦးဆောင်မှုကို ခံယူပါမည်။
–	ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီဝင်အဖြစ် ထာဝရ ခံယူပါမည်။
–	ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီအပေါ် ဘယ်တော့မှ သစ္စာမဖောက်ပါ။ မည်သူ့အခြေအနေတွင်ဖြစ်စေ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီအပေါ် ထာဝရ သစ္စာရှိပါမည်။
–	ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ၏ ရည်မှန်းချက်၊ မူဝါဒလမ်းစဉ်များနှင့်အညီ ပြည်သူလူထု၏ အကျိုးစီးပွားကို အစွမ်းကုန် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ပါမည်။
–	ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်နှင့် နိုင်ငံသားများအပေါ် သစ္စာစောင့်သိရိုသေပါမည်။
–	ဒို့တာဝန်အရေးသုံးပါးကို အမြဲတမ်း ခံယူကျင့်သုံးပါမည်။
–	နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို ထိန်းသိမ်းကာကွယ် စောင့်ရှောက်ပါမည်။
ခရိုင်အဆင့်ရွေးချယ်ပွဲကိုလည်း ၁၄-၆-၂၀၁၂ ရက်နေ့တွင် တောင်ကြီးမြို့ရှိ ပြည်နယ်ပါတီရုံးခန်းမမှာ ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်း၊ အဆိုပါအခမ်းအနားသို့ မြို့နယ်ပါတီကော်မတီဝင် (၁၅)ဦးလုံး တက်ရောက်ရမည်ဖြစ်ရာ စုစုပေါင်း (၁၅၀)ဦးဖြစ်ပြီး ၄င်း ရွေးချယ်ခံ ကိုယ်စားလှယ်(၁၅၀)ဦးထဲမှ ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းဖြင့် ပဏာမ (၉)ဦး ရွေးချယ်မှာဖြစ်ကြောင်း၊ ၄င်း(၉)ဦးနှင့် လက်ရှိ ခရိုင်ကော်မတီဝင် (၉)ဦးတို့မှလည်း ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းအရ တက်ရောက်သူအားလုံးမှ လျှို့ဝှက်ဆန္ဒမဲများ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါသည်။
အလားတူ ပြည်နယ်အဆင့် ရွေးချယ်ပွဲကိုလည်း ၁၅-၆-၂၀၁၂ ရက်နေ့မှာ ဆက်လက်ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီး၊ မြို့နယ်ပါတီမှ (ပ)ခေါင်းဆောင်၊ (ဒု)ခေါင်းဆောင်ပေါင်း(၂)ဦး၊ စုစုပေါင်း (၃၀)ဦးနှင့် ခရိုင်မှ (၉)ဦး ပေါင်း (၃၉)ဦးတို့မှ (၁၅)ဦးရွေးချယ်ပြီး ၄င်း (၁၅)ဦးနှင့် ယခုလက်ရှိ (၁၅)ဦး ပေါင်း (၃၀)ဦးတို့မှလည်း လျှို့ဝှက်ဆန္ဒမဲ ပေးစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်း အကြမ်းဖျင်းသိရှိရပါကြောင်း ပါတီဝင် (၁)ဦးမှ ပြောကြားပါသည်။
တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်အားလုံးမှာ တစ်ပြိုင်နက် ကျင်းပတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။ ဒီလိုကျင်းပတာဟာ နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီးရဲ့ လမ်းညွှန်ချက်ဖြင့် အမှန်တကယ် အချိန်ပေးလုပ်ဆောင်နိုင်သူ၊ ပြည်သူများမှ တင်မြှောက်သည့် စစ်မှန်သော ပါတီကော်မတီဝင်များပေါ်ထွက်လာနိုင်တယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ တကယ်လို့သား ကျင့်ကြံ ပြုလုပ်ကြမည်ဆိုလျှင် ကောင်းမွန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ လမ်းကြောင်းကြီးစီကို ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွင့်ဖြိုးရေးပါတီအမှတ်တကယ်လျှောက်လှမ်းနေတာကို လက်ခံရမှာပေါ့။သို့မဟုတ်ပဲ အရင်လမ်းစဉ်များအတိုင်း ကိုယ့်လူကိုရွေး မဲပေးကြေးဆိုလျှင်တော့ဖြင့် ပြည်သူကိုလှည့်စားတာလွန်လွန်းသွားပြီပေါ့ဗျာ။ ဘာဖြစ်ဖြစ် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာ ယခုလိုဒီမိုကရေစီဆန်ဆန် စနစ်တကျ နေရာပြန်လည်ရွေးနေတာဟာ ကောင်းမွန်တဲ့အလားအလာပါပဲလို့ပြောချင်ပါတယ်။
any body has written4post in this Website..
View all posts by anybody →
သေချာတာက အပေါ်က အကောင်ကြီးတွေကလွဲရင် အောက်ခြေ အောက်တန်းစားလေးတွေကို ပြန်ရွေးကြပေါ့။ အကလောင်ကြီးတွေကိုတော့ ပြည်သူတွေက ယုံကြည်ပီးသားဆိုတော့ ပြန်ရွေးစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။
အများပြည်သူအတွက် တကယ်အလုပ်လုပ်ဖို့ ရည်ရွယ်တယ်ဖြစ်လာရင်
ကြံ့ဖွတ်ကို ကြံ့ဖွံ့ ခေါ်ပေးဖို့ တာဝန်ယူတယ်။
“ကျွန်ုပ်သည် – ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီအဆင့်ဆင့်၏ ဦးဆောင်မှုကို ခံယူပါမည်။
– ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီဝင်အဖြစ် ထာဝရ ခံယူပါမည်။
– ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီအပေါ် ဘယ်တော့မှ သစ္စာမဖောက်ပါ။ မည်သူ့အခြေအနေတွင်ဖြစ်စေ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီအပေါ် ထာဝရ သစ္စာရှိပါမည်။
– ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ၏ ရည်မှန်းချက်၊ မူဝါဒလမ်းစဉ်များနှင့်အညီ ပြည်သူလူထု၏ အကျိုးစီးပွားကို အစွမ်းကုန် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ပါမည်။
– ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်နှင့် နိုင်ငံသားများအပေါ် သစ္စာစောင့်သိရိုသေပါမည်။
– ဒို့တာဝန်အရေးသုံးပါးကို အမြဲတမ်း ခံယူကျင့်သုံးပါမည်။
– နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို ထိန်းသိမ်းကာကွယ် စောင့်ရှောက်ပါမည်။”
အဲ့ဟာတွေကိုက မဟုတ်သေးဘူးလို့ ထင်မြင်မိပါတယ်ဗျာ။